Sergio Ramos Oo Magacaabay SADDEXDA Ciyaartoy Ee Uu Maalin Walba Wax Ka Barto Illaa Markii Uu Yimid Real Madrid - Gool24.Net
Kabtanka kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa magacaabay labada ciyaartoy ee uu sida joogtada ah wax uga barto tan iyo markii uu yimid Real Madrid.
Ramos oo ay da’diisu tahay 34 jir, waa udub-dhexaadka Real Madrid ee la’aantii ay wax weyni ka dhiman yihiin, sidaas oo kalena waxa uu u yahay xulka qaranka Spain oo uu iyagana booskaas oo kale ugu jiro, kabtankoodana yahay.
Sannadkii 2005 ayuu yimid Santiago Bernabeu isaga oo £18.5 milyan oo Gini ugaga soo wareegay Sevilla, waxaana kabtanka uu ka dhaxlay Iker Casillas, isaga oo ku biiray ciyaartoyda ugu sumcadda iyo guulaha badan naadigiisa.
Waxay difaaca Real Madrid soo wadaageen xiddigo waaweyn oo ay ka mid ahaayeen Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo Nazario, David Beckham iyo kuwo kale oo badan.
Waraysi uu siiyey wargeyska Marca ee kasoo baxa waddanka Spain ayaa lagu weydiiyey ciyaaryahannadii uu isku dayi jiray inuu wax ka barto, waxaanu magacaabay saddex laacib oo uu qiray in maalintiisii koowaad ee uu Santiago Bernabeu uu yimid uu bilaabay sidii uu wax uga baran lahaa.
“Markii aan imid Real Madrid, waxa aan bilaabay inaan wax ka barto halyeeyada sida Rauul iyo Iker. Cannavaro ayaa isaguna ahaa ciyaartoy aan maalin walba wax ka baran jiray. Waxa aan isku dayi jiray la qabsigooda sida ugu wanaagsan ee ugu suurtogalsan.” Ayuu yidhi Sergio Ramos.
Laacibkan waxa uu hadda ku jiraa sannadkii 15aad ee uu xidhan yahay garanka Real Madrid waxaanu u saftay in ka badan 650 ciyaarood oo dhamaan tartamada ah, walina waxa uu sii wadayaa in kooxdu kusii tiirsanaato iyadoo ay u socdaan wada-hadallo lagu kordhinayo heshiiskiisa ku eg dhamaadka xili ciyaareedka hadda bilaabmay.